बेसकैम्पले प्रोजेक्ट टेम्प्लेट सुरूवात गर्‍यो Martech Zone
बेसकैम्पले परियोजना टेम्प्लेट सुरूवात गर्‍यो
बुधबार, अक्टोबर 10, 2012 Douglas Karr
मार्केटर्सको रूपमा हामीले गर्ने प्रायः दोहरो हुन्छ ... अनुसन्धानबाट र ब्ल्ग पोष्ट लेख्न, अनुसन्धान गर्न र इन्फोग्राफिक डिजाईन गर्न, भिडियो सम्पादन र प्रकाशन गर्न, मार्केटिंग अभियान विकास गर्न र कार्यान्वयन गर्न। बेसकैम्प भर्खरै थपियो परियोजना टेम्प्लेटहरू यसको अनुप्रयोगमा।
प्रोजेक्ट टेम्प्लेटमा, तपाईले प्रिडिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नु पर्ने सूचिको धेरै चाँडै यस परियोजनालाई र्‍याम्प गर्नुहोस्।
त्यसो भए, तपाई प्रोजेक्ट टेम्प्लेट खोलेर केवल प्रोजेक्ट सुरू गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईं बन्द हुनुहुन्छ र चलिरहनुभएको छ!
हामी हाम्रो एजेन्सीको साथ बेसक्याम्प दैनिक प्रयोग गर्दछौं। केवल एक मात्र उपकरण मेरो चाहना थियो यो एक सार्वभौमिक कार्य-सूची थियो जहाँ हामी हाम्रा सबै परियोजनाहरूमा प्राथमिकता दिन सक्थ्यौं बरु ती प्रत्येक भित्र काम गर्ने।
टैग: Basecampपरियोजनापरियोजना टेम्प्लेट
डग साझेदारीको लागि धन्यवाद! यो बेसक्याम्पको पुरानो संस्करणको साथ अवस्थित छ,
तर तिनीहरूले नयाँ संस्करणको लागि मात्र जारी गरिरहेको जस्तो लाग्छ। कुन हो
तपाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? नयाँ संस्करणमा एक टन राम्रो प्रतिक्रिया देखेन।